सरकार गठनका पाँच विकल्प :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
सरकार गठनका पाँच विकल्प
एमाले–कांग्रेसको गोप्य सम्बन्धको चर्चा
काठमाडौं । फागुन ७ गतेभित्रै नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ । तर नयाँ सरकार बहुमतको बन्छ कि अल्पमत को ? भन्ने स्पष्ट तस्बिर आइसकेको छैन । एमाले र माओवादीबीच तत्काल पार्टी एकीकरणको सम्भावना नदेखिएका कारण नयाँ सरकारको स्वरूप सम्बन्धी स्पष्ट तस्बिर नदेखिएको हो ।
एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित देखिए पनि कुन कुन दलले साथ दिन्छन् ? भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । ओलीलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दियो भने आश्चर्य नमाने हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
नयाँ सरकारको पहिलो सम्भावना एमाले र माओवादी गठबन्धन नै हो । दोस्रो सम्भावना एमाले र संघीय समाजवादी फोरमबीच गठबन्धन हो । तेस्रो सम्भावना एमाले र राजपा गठबन्धन हो । पाँचौं सम्भावना एमाले र कांग्रेस हो । छैटौं, तर अत्यन्त झिनो सम्भावना माओवादी, कांग्रेस, फोरम र राजपा गठबन्धन हो । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो सम्भावना सफल भएन भने पाँचौ सम्भावनाका लागि नेपाली कांग्रेस लचिलो भएको समाचार स्रोतले जनाएको छ ।
यसका लागि कुनै तन्तुमार्फत एमाले र कांग्रेसबीच कुराकानी अघि बढिरहेको दाबी समाचार स्रोतको छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरैपटक मुलुकमा कांग्रेस एमालेबीचको गठबन्धन सरकार चलेको छ र त्यस्तो सरकारले मुलुकलाई निकास दिएको नजिर छ । २०५६ सालको आमनिर्वाचन कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले नै गराएको थियो । २०६० सालमा पनि कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले माओवादी समस्यालाई तार्किक समाधानमा पु¥याउन सफल हुन लागेकै बेला राजाबाट ‘कु’ भएको थियो । २०६३ मा सम्पन्न जनआन्दोलनपछि पहिलो सरकार कांग्रेस र एमाले गठबन्धनद्वारा नै बनेको थियो । त्यही सरकारले, बृहत् शान्ति सम्झौता गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो ।
२०६५ सालमा बनेको कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले माओवादी लडाकुका हतियार राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सफलता प्राप्त गरेको थियो । २०७० सालमा बनेको कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकारले विनाशकारी भूकम्पबाट जुध्दै संविधान जारी गर्ने सफलता हासिल गरेको थियो । विगत २० वर्षमा मुलुकमा जे जति उपलब्धि हासिल भएका छन्, त्यसबेला कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारका बेलामै भएको देखिएको छ । यो २० वर्षको अवधिमा पाँचपटक कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकार बनेको देखिन्छ । अब मुलुकको एक मात्रै एजेन्डा स्थायी सरकार र आर्थिक समृद्धि हो । यसका लागि प्रमुख शक्ति कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य होस् भन्ने दबाब मुलुकको बौद्धिक क्षेत्रबाट परेको छ । विगत १० वर्षयता एमाले माओवादीबीच चारपटक गठबन्धन सरकार गठन भएको देखिन्छ । तर यी चारैवटा सरकारले एउटा सिन्को पनि भाँच्न नसकेको मुलुकको बौद्धिक जगतको विश्लेषण छ ।
Tarun Khabar0response सोमबार,२९ माघ २०७४ 107 Views